Iza i Eva Copa, ilay zara raha fantatra nefa nanampy nanokatra ny làlan’i Bolivia ho any amin’ny fifidianana vaovao? · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraGlobal Voices Latin America
Voadika ny 26 Novambra 2019 5:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Français, Português, 繁體中文, English
Sarin'i Eva Copa avy amin'ny kaonty Instagram an'ny Antenimeran-doholona boliviàna.
Hatramin'ny vao haingana kely izao, somary nahakivy ny hanantena ny fisiana fifidianana vaovao tao Bolivia. Fepetra iray tena nilain'ny firenena ny fanambaràna fisiana fifidianana iray vaovao mba hanombohana ny dingana fampandriana fahalemana, taorian'ireo herinandro maro nitrangàna fitokonana, hetsipanoherana , fanakanan-dàlana ary herisetra nateraky ny fandàvana ny vokapifidianana izay ho filohampirenena natao tamin'ny 20 Oktobra, ka nitondra ho amin'ny fametrahan'ny filoha Evo Morales ny fialàny. Sarotra tamin'ireo antoko mpanohitra avy amin'ny governemanta vonjimaika tarihan'ny filoha Jeanine Áñez sy ny antoko politika MAS (hetsika ho amin'ny sosialisma) an'i Morales ny nahita marimaritra iraisana momba izay fepetra hanaovana fifidianana vaovao.
Niainga avy amin'ireo fifampiraharahana sy marimaritra anefa, nisy lalàna iray nosoniavina tamin'ny Alahady 24 Novambra, izay nanokatra ny làlana hankany aminà fifidianana vaovao hatao amin'ny fotoana tsy mbola voafaritra.
Endrika iray tao anatin'ny fampifanantonana sy ny fifampidinihana ilay filoha mitarika amin'izao fotoana izao ny antenimeran-doholona boliviàna, Mónica Eva Copa Murga, na Eva Copa araka ny ahafantaran'ny maro azy. Taorian'ny fialàn'ny filohan'ny antenimeran-doholona teo aloha sy ireo manampahefana ambony hafa tao amin'ny antoko; i Copa, loholona iray avy amin'ny MAS avy any El Alto, Bolivia, no niandraikitra ny fitarihana araka ny lalàna mifehy ny antenimieran-doholona. Marobe anefa ireo Boliviàna no tsy dia mahafantatra loatra ny aminy.
Araka ny ilazan'i Daniel Gómez avy amin'ny tranonkalambaovao ALnavío azy,
Tsy te-hahita herisetra sy faty olona bebe kokoa ao Bolivia intsony i Eva Copa. Fifanatonana , fifampiresahana, ary fandriampahalemana no tadiaviny. Io no antony iasàny mba hisian'ny fahazoana antoka fa hisy ireny fifidianana tena iankinan'ny ain-dehibe ireny, araka izay haingana indrindra, araka ny voalazan'ilay fifanarahana nosoniaviny tamin'ity Alahady ity niaraka tamin'ny Filoha vonjimaika Jeanine Añez. Aoka tsy ho adinointsika fa Eva Copa no mpitarika ny MAS, antokon'i Evo Morales. Antoko iray voazarazara eo amin'ireo mpomba tsy mivadi-pitokisana amin'i Evo sy ireo mijery kokoa ny zavamisy. Solontenan'ireo andiany farany ireo izy.
Tsy ela akory izay i María Galindo avy amin'ny firaisan'ireo feminista Mujeres Creando (Vehivavy Mpamorona) dia namoaka lahatsoratra andrana fohy tamin'ny teny espaniôla manolotra fohifohy an'i Copa, tao anatin'ny La Vaca, ilay gazetiboky mivoaka isambolana ety anaty aterineto ao Arzantina. Ao anatin'ilay andrana, zarain'i Galindo ny fitolagàgany amin'ny fahasahian'i Copa ary omeny ny sasany amin'ireo zavatra nolalovany mba hampidirana ho amin'ireo mpamaky ity mpitarika tsy dia nahazatra ity:
32 taona izy, avy ao an-tanànan'i El Alto, efa herinandro maro izy no tsy natory an-trano noho ny resaka fiarovana; mpianatra momba ny asa sôsialy ary ny fiainana tsy nanome azy fahafahana hamita ny asa nofinidiny. Ao amin'ny oniversitem-panjakana ao El Alto izy no mianatra […] Tsy chola [olona manana fiaviana tantsaha indizeny], na dia izany tokoa aza ireo raibe sy renibeny: birlocha izy [fomba fiteny anondroana ny taranak'ireo cholas]. Manao pataloha maotina, mainty sy lava ny volony saingy tsy narandrana, fa nakiraviravy na afatotra miaraka toy ny rambon-tsoavaly. Mainty matroka ny molony, ny endriny main'ny masoandro tany El Alto ary indrindra indrindra, ny fomba fiteniny — mifangaro hafahafa ao ny mikasaotsaoka, ny hentitra sy ny saro-kenatra — dia mametraka azy ho mpanao politika mifanohitra tanteraka amin'i Yanine Añez.
(Copa) dia vehivavy iray izay manaiky hilanja zioga nandosiran'ny hafa. Rehefa nanontaniako azy ny fomba sy ny antony nanosika azy hanao toy izany, dia hoy izy “Satria aho avy any El Alto, satria aho tsy manana fomba hafa azo atao, satria aho tsy hanary an'i Bolivia ka handeha any an-kafa. Tsy ilaiko ny mandositra.” Ary avy eo nanontaniako azy ny antony mampisy olona marobe mandeha mandositra, dia hoy ny navaliny , “lazain-dry zareo fa noho ny antony ara-pianakaviana”.
Faran”i Galindo amin'ny fiderana an'i Copa noho ny niaretany ireo tsindry teo anatrehan'ireo sakantsakana marobe ny andrana nataony:
El Alto dia tanàna iray ahitàna isnandro vehivavy iray mibaby entambe anaty aguayos [fonosana iray maroloko nentindrazana], mitatitra ny entam-barotr'izy ireo, na ny zanany, ny ahiahiny sy ny fanantenan-dry zareo. Milanja zioga iray ihany koa i Eva — zioga feno fanantenana amin'ny hampitsaharana ny ady an-trano, ziogan'ny fanasitranana ireo ratra nateraky ny herisetra sy famonoana, ziogan'ny nofinofin'ireo maty novonoina, ziogan'ny ranomason'olona misaona tsy afaka ny tsy hitomany — mampiseho tsara fa tsy tian'ny vehivavy ny manafina ny halementsika na ny hirifirintsika.
Tena mifanohitra amin'i Yanine Añez, i Eva, ary amin'i Evo [Morales] ihany koa.
Tao amin'ny fandaharanay anaty onjampeo dia nitafan‘i Galindo ihany koa i Copa tao amin'ny Radio Deseo ao La Paz.
Tantaran'ny Bolivia farany
19 Avrily 2021Fitantanam-pitondrana
01 Oktobra 2020Hafanàm-po nomerika